Радио Голос Бирмы тестирует новый поток вещания / Radio Voice of Burma tests new broadcast stream / မြန်မာ့အသံရေဒီယိုအသံလွှင့်ထုတ်လွှင့်မှုအ -5Сентября 2021 - Телерадиокомпания Голос Бирмы - Голос все Азии!
Главная » 2021 » Сентябрь »5» Радио Голос Бирмы тестирует новый поток вещания / Radio Voice of Burma tests new broadcast stream / မြန်မာ့အသံရေဒီယိုအသံလွှင့်ထုတ်လွှင့်မှုအ
Дорогие радиослушатели! Радио Голос Бирмы тестирует свой новый радиопоток в связи с закрытием старого сервера вещания и переходом на новый сервер. Новый поток пока работает в тестовом режиме, но в ближайшее время станет основным, и будет вещать согласно программе передач радио Голос Бирмы. Старый поток по прежнему работает в штатном режиме до момента полного перехода вещания на новый поток. Адрес нового потока вещания https://listen4.myradio24.com/39982 . Подробную информацию о вещании ТРК Голос Бирмы вы можете задать по телефону клиентской службы +7 800 350 97 90.
ချစ်ခင်ရပါသောရေဒီယိုနားထောင်သူများ မြန်မာ့အသံရေဒီယိုသည်ထုတ်လွှင့်မှုအဟောင်းကိုပိတ်ခြင်းနှင့်ဆာဗာအသစ်သို့ကူးပြောင်းခြင်းတို့နှင့် ဆက်စပ်၍ ၎င်း၏ရေဒီယိုစီးကြောင်းအသစ်ကိုစမ်းသပ်နေသည်။ စမ်းချောင်းအသစ်သည်စမ်းသပ်ဆဲအဆင့်တွင်ရှိနေသေးသော်လည်းမကြာမီကာလအတွင်းတွင်ပင်မအသံဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပြီးမြန်မာ့အသံအစီအစဉ်၏အသံလွှင့်အစီအစဉ်အတိုင်းထုတ်လွှင့်ပေးလိမ့်မည်။ ထုတ်လွှင့်မှုအသစ်သည်ထုတ်လွှင့်မှုအပြည့်အ ၀ ကူးပြောင်းချိန်အထိအဟောင်းစီးကြောင်းသည်ပုံမှန်အခြေအနေတွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ထုတ်လွှင့်မှုအသစ်၏လိပ်စာမှာ https://listen4.myradio24.com/39982 ဖြစ်သည်။
Dear radio listeners! Radio Voice of Burma is testing its new radio stream in connection with the closure of the old broadcast server and the transition toanew server. The new stream is still working in test mode, but in the near future it will become the main one, and will broadcast according to the radio program of the Voice of Burma. The old stream still works in the normal mode until the moment of the complete transition of broadcasting to the new stream. The address of the new broadcast stream is https://listen4.myradio24.com/39982.
Категория: Новости Голоса Бирмы | Просмотров: 102 | Добавил: Matrix | Теги: New, вещания, Радио Голос Бирмы, новый, Broadcast, မြန်မာ့အသံရေဒီယိုအသံလွှင့်ထုတ်လွှင့, tests, Stream, тестирует, Radio Voice of Burma, Поток